XOG: Sadio Mané v Kieran Trippier, Heung-Min Son v Arnold, Van Dijk v Harry Kane Iyo Lixda Meelood Ee Ay Liverpool & Tottenham Ku Kala Guulaysan Karaan Finalka UCL. - Gool24.Net
XOG: Sadio Mané v Kieran Trippier, Heung-Min Son v Arnold, Van Dijk v Harry Kane Iyo Lixda Meelood Ee Ay Liverpool & Tottenham Ku Kala Guulaysan Karaan Finalka UCL.
June 1, 2019 Mahamoud Batalaale
1- Mohamed Salah v Danny Rose
Dagaalka ugu danbeeya uguna muhiimsanaan kara ayaa dhex mari doona Mohamed Salah iyo difaaca bidix ee Danny Rose waana meelo ka mid ah halka ay labada kooxood ciyaarta saamayn wayn ugu yeelan karaan.
Danny Rose waa difaac bidix oo tayo sare ku leh kubbada cagta wuxuuna leeyahay khibrad uu ku joojin karo ciyartoyda ugu halista badan laakiin waxa uu Rose wajihi doona Mohamed Salah oo u dhiiro gashan si aan abid loo arag.
Mohamed Salah waxa uu finalka Champions League iskeenayaa isaga oo ilaahay ugu mahad celinaya in uu siiyay fursad labaad oo uu kaga ciyaaro finalka Champions league kadib qalbi jabkii uu xili ciyaareedkii hore kala kulmay dhaawicii ku soo gadhay isla finalkii Champions league.
Mohamed Salah waxa uu rajaynayaa in markan uu nasiibkiisu ka fiicnaado finalkii Champions League ee xili ciyaareedkii hore oo uu ciyaarta si nabadgalyo ah ku dhamaysto isla markaana uu goolal ku caawiyo kooxdiisa Liverpool.
Pochetteno ayaa markasta si khaas uga walwala saamaynta Mohamed Salah waxayna ku qasabtaaa in uu shaxdiisa u qaabeeyo 5-4-1 oo ah shan difaac ah, afar khadka dhexe ah iyo hal weerarka ah taas oo haddii uu markale sameeyo si wayn u caawin karta Liverpool.
Mohamed Salah ayaa sabab u ahaa kulankii ugu danbeeyay ee Liverpool iyo Tottenham in ay Reds guul ku gaadhay goolkii uu sida qaladka ah iskaga dhaliyay Alderweireld isaga oo Salah darbo uu ku dhalin lahaa goolkani ay sabab u noqtay.
Inkasta oo aanu Danny Rose kali ku noqon doonin ilaalinta Mohamed Salah oo ay isha kula hayn doonaan Alderweireld, Vertonghen iyo waliba ciyaartoyda khadka dhexe, hadda Rose ayaa ah ciyaartoyga kowaad ee loo xil saari doono in uu Salah xidho.
Mohamed Salah waxa uu xili ciyaareedkan soo ahaa mid sii joogteeyay layaablkii uu Liverpool ku soo sameeyay xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay waana ciyaartoy awood buuxda u leh in uu daqiiqad kasta saamayn yeelan karo.
Laakiin haddii uu Danny Rose ku guulaysto in uu joojiyo xawaaraha Mohamed Salah iyo in uu kubbada la soo galo xerada ganaaxa, waxa uu kooxdiisa ka dabooli karaa halis wayn oo ay Liverpool ku guulaysan karto halka haddii uu Salah gacanta sare yeesho uu Liverpool guul ku hogaamin doono.
Si kastaba ha ahaatee, lixda goob dagaal ee aan soo sharaxnay waxaa ku biiri doono dhamaan ciyaartoyda kale ee aanan kaalinta ay kulankan ka qaadan karaan ka hadal maadaama oo 22 ka ciyaartoy ee labada kooxood u ciyaari doona iyo kuwa badalka ku iman doonaa ay dhamaantood saamayn yeelan karaan.